Mid ka mid ah wasiirada Cusub ee Galmudug oo soo dhaweeyay Xilka loomagacabay – SBC
Mid ka mid ah wasiirada Cusub ee Galmudug oo soo dhaweeyay Xilka loomagacabay
Maalmo ka hor ayay ahayd markii uu Madaxwenaha Galmudug Mudane Maxamed Axmed Caalin uu magacaabay 4 wasiir oo ka tirsanaan doona Xukuumada Cusub ee Galmudug, Ayadoona uu maanta soo dhaweeyay Xil magacaabistiisa Wasiirka Cusub ee Arimaha gudaha iyo Amniga Galmudug.
Abshir Diini Cawaale Wasiirka Cusub ee Arimaha Gudaha iyo amniga Dawlad Gobaledka Galmudug, Ayaa si diiran u soo dhaweeyay Xilka uu Maalmo ka hor u magacaabay Madaxweynaha Galmudug Mudane Caalin, Abshir ayaa hadalkiisa ku sii daray in uu Xilka kala wareegi doono Wasiirkii hore ee Arimaha Gudaha iyo Amniga Axmed Maxamed Xaashi Axmed dheere.
Wasiirka Cusub Abshir Diini ayaa sidoo kale carabaabay in uu qibrad wanaagsan u leeyahay Xilkaan loo magacaabay waxa uuna intaa ku darayi in uu wax ka qaban doono Xaalada Amniga iyo Arimaha Gudaha, Waajibka i saarana aan Gudan doono.
Dhan walba hajirtee Soo dhaweynta Xil magacaabidiisa Wasiirka Cusub ee Arimaha Gudaha iyo Amniga Galmudug Ayaa waxa ay ku soo beegmaysaa Xili maalmo kahor uu Madaxweynaha Galmudug Xilkaas u magacaabay, Ayaado Maalinta bari ah lagu wado in lamagacaabo, inta ka harsan Golaha Wasiirda Galmudug.
liibaan C/laahi Faarax libaan qaran